Madaxda Dawladda Federaalka oo Shirsaxaafadeed Qabtey [MAQAL] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxda Dawladda Federaalka oo Shirsaxaafadeed Qabtey [MAQAL]
Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed iyo Raysalwasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si wada jir ah shirsaxaafadeed ugu qabtey xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia.
Madaxweynaha ayaa ka hadley xaaladihii u danbeeyey ee dagaalada maalmihii la soo dhaafey ka socdey magaalada Muqdisho, isaga oo sheegay in ciidamada dawladdu ay gaareen guulo isdaba joiog ah, kuwaas oo ay ugu danbeysey dhufgeysyadii xaafadda Hodan ay ku lahaayeen al-Shabaab iyo degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo oo si buuxda gacanta dawladda u gashey.
Shariif Shiikh Axmed ayaa al-Shabaab ku tilmaamey in xaaladdu aad uga xuntahay ayna hadda bilaabeen in ay soo qafaalaan odayaal kor u dhaafey 70 sano, kuwaas oo qaarkood caafimaadkoodu aanu wanaagsanayn.
Dhanka kale Madaxweynaha ayaa ku baaqey in gar-gaar bini’aadanimo la gaarsiiyo Beled-Xaawo, halkaas oo ah magaalo Istraatiiji ah isla markaana si deg-deg ah loo gaarsiin karo gar-gaar, sida uu yiri Shiikh Shariif.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamada dawladda ee ku sugan Beled-Xaawo ay loogistikada ka helayaan dawladaha dersika ah, waxaana sidoo kale su’aalaha suxufiyiinta qayb kamid ah ka jawaabey Raysalwasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Dhegayso Shirka saxaafadeed: